Si fudud nidaameed Music ka Lugood in iPad
Sidee ayaad u music nidaameed ka Lugood in iPad
> Resource > Lugood > Sidee Waxaad Ma music nidaameed ka Lugood in iPad
Users badan oo sida dhegaysiga muusikada oo ay la iPad, gaar ahaan marka ay ka soo kaliyoobaan. Haddii aad leedahay iPad iyo leennahay maanka weyn oo u hagaagsan music ka Lugood in iPad , baad u socotaa in Lugood furo hal mar oo music u hagaagsan in aad iPad aan ka fikirin?
Inkastoo Lugood noqon kartaa anfacaya marka aad music ka Lugood wareejiyo iPad , waxaa weli ciirsi in mid ka mid dhinac - Lugood marna masixi karin gabayadii hore ee iPad markii syncing. Sidaas darteed, maxay hadii aad kaydisay music on your iPad ka iDevices kale oo aadan rabin in ay lumiyaan marka loo dhoofiyo gabayadii cusub? Ma waxaad tahay qof u nugul ha Lugood u hagaagsan music si toos ah ama aad raadineyso qalab saddexaad-qayb si looga fogaado in la tirtiro gabayadii hore aad iPad?
Dhab ahaantii, in aad nuqulka music ka Lugood in iPad aan tirtiro gabayadii hore ma adag tahay dhamaan inta aad ku rakibi ah tababaraha qalab Apple - TunesGo Wondershare . Waxaa kuu saamaxayaa inaad dajiyaan playlists badan oo iPad ka Lugood waqti si fudud. Marnaba ma u baahan tahay wax laga walwalo aad heeso hore la tirtiray. Intaa waxaa dheer, waxa ay si buuxda u la Lugood dambeeyay 11.
2 tallaabooyin ay ku hagaagsan music ka Lugood in iPad
Download version maxkamad free of TunesGo iyo raac tutorial hoose. Waxaad ugu dhakhsaha badan noqon doonaa cad oo ku saabsan sida ay u gudbiyaan music aad iPad.
Step1: Ku rakib oo ay maamulaan barnaamijkan
Bilowgii, waa in aad la rakibi barnaamijka aad compouter iyo waxa maamula. Connect aad iPad la computer via cable USB ah. Marka uu ku xiran, TunesGo waxaa si toos ah lagu ogaan doonaa.
Fiiro Gaar ah: Waa in aad soo dajiyo Lugood on your computer hor inta aadan isticmaalin TunesGo.
Step2: music ka Lugood in iPad u hesho
Markaas, guji "playlist" khaanadda ka hadhay interface ugu weyn. Daaqadda playlists, guji "Add" ku darto Lugood playlist in aad iPad. Waxa aad ku dhacaa inta badan waa in aan marnaba tirtiri doonaa playlists hore ee iPad. Hase yeeshee, waxa kaliya ku darayaa music iyo playlists in aad iPad.
Fiiro gaar ah: TunesGo taageeraa dhamaan noocyada iPad, kuwaas oo, iPad mini, iPad bandhigay isha, iPad cusub, iPad 2 iyo iPad shuruud ah in qalabka waddaa macruufka 5, macruufka 6, macruufka 7, macruufka 8 ama 9 macruufka.
Iyada oo taageero ka TunesGo, waxa kale oo aad awood u wareejinta music, videos, Podcast iyo in ka badan dib u Lugood iyo PC. Waa wax fiican in tababare qalab Apple wanaagsan oo waxtar leh si ay uga caawiyaan maamuli lahayd iPad in hab sahlan oo fudud.
Sida loo hagaagsan iPhone Xiriirada in Outlook
Kala beddelashada Photos in iPad ma noqon kartaa fududaynta
Android ka Bedelka Music inay Lugood Si fudud
Sida loo Download Free Music inay Lugood
Siyaabaha aad u hesho farshaxanka album on Lugood
Best Lugood Abaabulaha
Sida loo soo celiya iPhone aan Lugood
Talo & Tricks u iPhone Sida loo kaabta si Mac
Sidee si ay u gudbiyaan Music & Playlists ka iPhone, iPad ama iPod in PC